Fantaro i Mamy sy i Zo, mpandrindran’ny Global Voices amin’ny teny Malagasy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2014 16:14 GMT
Zo sy Mamy. Sary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Ny tetikasa Global Voices amin'ny teny Malagasy, izay teny ofisialin'i Madagasikara, dia manana ekipa mpandika lahatsoratry ny Global Voices anisan'ny mavitrika indrindra. Ny tetikasa, izay niforona tamin'ny 2007, dia nahavita fandikanteny miisa mihoatra ny 6500 hatramin'izao. Ny mpandika teny sy mpandrindran'ny GV amin'ny teny Malagasy dia mipetraka eto Madagasikara avokoa.
Ato anatin'ito resaka notarihin'i Thalia Rhame, Libaney mpanoratra ato amin'ny Global Voices, ito no miresaka momba azy ireo sy ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fitaterana vaovao avy amin'izao tontolo izao ho an'ny Nosy Mena ao amin'ny Ranomasimbe Indiana ny mpandrindran'ny Global Voices amin'ny teny Malagasy Mamy sy Zo.
Global Voices (GV): Lazao ny mombamomba anareo.
Mamy (MA): Ny tena anarako dia Maminirina Radifera Ranaivoson, fa ny rehetra dia mahafantatra ahy amin'ny hoe Avylavitra amin'ny aterineto. Izaho dia mpiasa amina orinasa lehibe iray eto Antananarivo, renivohitry Madagasikara. Izaho dia rain'ny zazavavy telo. Ny roa voalohany (Candy sy Miora) dia efa mpikambana ao amin'ny ekipan'ny GV Lingua Malagasy, ary ny zanako faravavy (13 taona) dia efa mizatra amin'ny fandikàna ireo izay vitany sy amin'ny fanampiana ireo rahavaviny.
Zo (ZO): Ny anarako dia Andriamifidisoa Zo, ny solon'anarako amin'ny aterineto dia Jentilisa [izay midika amin'ny teny anglisy hoe “tsara fanahy”; amin'ny hebreo hoe “Goyim.”] – ary afaka midika ihany koa amin'ny teny malagasy hoe “malefaka”. Araka ny nosoratako ao amin'ny mombamomba ahy ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Malagasy, izaho dia mpitoraka bilaogy nanomboka tamin'ny fiandohan'ny 2006 ary manoratra amin'ny teny malagasy ara-akademika ranoiray (tsy misy teny frantsay na teny anglisy). Teraka teto ary mipetraka eto Madagasikara aho. Ao amin'ny bilaogiko (VETO=Vaovao Eto an-TOerana) dia miezaka aho ny milaza amin'ny Malagasy rehetra sy ireo izay mahafantatra na mianatra ny teny malagasy izay zava-mitranga eto amin'ny firenena. Ny bilaogiko dia nahazo ny loka BOMB (Best of Malagasy Blogs – Mendrika amin'ny Bilaogy Malagasy) tamin'ny 2007 tamin'ny sokajy Teny Malagasy. Ato amin'ny Global Voices, miezaka aho ny mandika ny vaovao iraisampirenena amin'ny teny Malagasy. Fa izaho dia tsy mpanao gazety! Ataoko io mba anandratana ny teny Malagasy na dia tsy miombon-kevitra foana amin'ireo izay voalaza ao amin'ny lahatsoratra sasany aza aho.
GV: Ahoana no nahafantaranareo ny Global Voices ?
MA: Izaho dia tia manoratra hatramin'ny izaho mbola tanora mpianatra. Fa tamin'ny 30 Oktobra 2007 tamin'ny 07:58 vao nahazo aterineto ao an-trano ary nanokatra ny bilaogiko voalohany tamin'ny Skyrock (http://avylavitra.skyrock.com/). Tamin'izany fotoana izany dia bilaogin-tsary izy io. Taty aoriana, nisafidy ny hanoratra sy hitatitra miaraka amin'ny sary araka izay azo natao aho, fa tsy mitantara fotsiny ihany. Nanokatra bilaogy telo hafa aho tamin'ny WordPress, fa ny iray izay be mpamaky indrindra dia Gazetyavylavitra. Nahazo ny loka Best of Malagasy Blogs (Mendrika amin'ny Bilaogy Malagasy) tamin'ny 2009. Mino aho fa ny zavatra tsikaritry ny namako indrindra dia ny hatsaran'ny teny Malagasy ampiasaiko sy ny votoatin'ny zavatra soratako, ary dia nanapa-kevitra ny hanasa ahy hiara-hiasa miaraka amin'ny GV izy ireo. Nifandray tamiko i Mialy Andriamananjara sy Lova Rakotomalala mba ho lasa mpandika lahatsoratra aho tamin'ny voalohany. Nandresy lahatra ahy koa I Jentilisa (Zo).
ZO: Tamin'ny fiandohan'ny 2007, ny mpanoratra amin'ny Global Voices Mialy Andriamananjara dia nanasa ahy hirotsaka amin'ny GVO amin'ny teny Frantsay, fa nolaviko tamin-pahatsorana ary nolazaiko fa ekeko izany raha fandikàna ny teny anglisy ho amin'ny teny malagasy. Talohan'izany, tsy nahalala na inona na inona mahakasika ny Global Voices aho. Volana maro tao aorian'io fifanakalozana io, nanasa ahy indray i Mialy, tamin'io indray mitoraka io kosa, hiditra amin'ny GV amin'ny teny Malagasy ary dia nanaiky aho. Izaho dia anisan'ny voalohany niditra tamin'ny GV amin'ny teny Malagasy tamin'ny niandohany. Izany no anisan'ny antony nanekeko ny hirotsaka ao anatin'ny Vondron'ny Global Voices.
GV: Afaka milaza zavatra vitsivisty momba ny GV amin'ny teny Malagasy ve ianareo?
Ma: Ny fandikanteny nataoko voalohany ho an'ny GV dia tamin'ny 10 Martsa 2008. Ankehitriny, nahadika lahatsoratra miisa 1208 aho. Tsy voaisako ireo lahatsoratra izay notsaraiko koa. Tao anatin'ireo taona niarahana tamin'ny GV Malagasy ireo, mahatsapa aho fa izaho sy i Jentilisa dia nanao izay azonay natao rehetra mba hampandeha azy: fandikàna avy amin'ny teny anglisy ho amin'ny teny malagasy mba ahafahan'ny mponina malagasy mahazo vaovao iraisam-pirenena. Vaovao ara-kolotoraly, fomba fiaina, fivoarana, politika, ekonomika, sns. Mila mahita zava-baovao mba ahafahana mampitaha sy mivoatra.
Amin'izao fotoana izao, ny GV amin'ny teny Malagasy dia anisan'ireo tetikasan'ny GV Lingua mavitrika indrindra. Ny anton'io fahavitrihana io dia tsotra: miezaka izahay ny manolotra dikanteny avo lenta noho izany dia, hamarininay ny antsipirihany rehetra mba hahazoana antoka fa ny dikanteny dia mitovy amin'ny lahatsoratra niaingàna. Noho io fitandremana ny antsipirihany io, ny hatetiky ny famoahana lahatsoratra dia manao avo sy iva tsindraindray ho an'ny rehetra: miankina amin'ny halavan'ny lahatsoratra, ny fanovàna atao ary, mazava ho azy, ny fahafahana mahazo aterineto.
ZO: Folo mahery izahay no mpandika lahatsoratra ao anatin'ny vondrona ary betsaka ny vehivavy noho ny lehilahy. Araka ny nolazaiko teo aloha, tamin'ny 12 Septambra 2007 izahay no nanomboka. Lahatsoratra lava foana no safidinay ary vitsy ihany ny lahatsoratra fohy. Miezaka izahay ny hahavita ny fandikàna aloha indrindra araka izay azo atao mba anarahana ny fihodin'ny vaovao ary mba ho voalohany manana ny vaovao amin'ny teny Malagasy. Misy fotoana haingana be ny mpandika teny ka tsy maharaka izahay mpandrindra. Mihevitra aho fa mitàna ny laharana fahatelo izahay raha ny isan'ny lahatsoratra mivoaka isan'andro no jerena (lahatsoratra 2,89 isan'andro).
Fa na dia miezaka ny hanaraka ny hazakazaky ny vaovao aza izahay amin'ny famoahana lahatsoratra voadika, dia mbola mila miantoka fa avo lenta ny kalitaon'ny asa (ny teny tena izy amin'ny tena toerany). Izahay, amin'ny maha-mpandrindra anay, dia mahafantatra fa ny mpandika teny dia mahazo ny tian'ny lahatsoratra ambara nefa dia manana fahazarana mandika arabakinteny ry zareo. Saingy ny teny Malagasy dia tsy tokony hanaraka ny fitsipi-pitenenan'ny lahatsoratra niaingana. Rehefa manaraka ny firafitry ny fehezanteny araka ny fomba tandrefana isika dia manjary sarotra ho an'ny mpamaky Malagasy ny mamaky sy mahazo ny dikanteny Malagasy. Indraindray, voatery manamboatra ny fehezanteny izahay mba hanamoràna ny famakiana ny lahatsoratra.
GV: Fantatry ny mpampiasa aterineto eto Madagasikara tsara ve ny GV? Iza no mamaky ny GV amin'ny teny Malagasy?
MA: Azo lazaina fa fantatry ny olom-pirenena sy mpampiasa aterineto tsara ihany ny GV. Ny pejinay ao amin'ny Facebook dia manampy amin'ny fanandràtana ny tranonkala. Manana kaonty Twitter koa izahay. Ny GV amin'ny teny Malagasy dia mandray anjara ihany koa amina hetsika samihafa, toa ny fampianarana mibilaogy ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Ivotoeran'ny Fanaovan-gazety Malagasy / WWF Antsakaviro, izay niarahako niasa tamin'i Candy, Lalah Ariniaina ary ny Ambasady Amerikana. Izaho dia vahiny nandray fitenenana tamin'ny volana lasa tamina fihaonana momba ny tambazotra sosialy. Io dia hetsika karakarain'ny “co-working hub” (habaka fiasana miaraka amin'ny hafa) HabakaMG isaky ny roa herinandro. Raha momba ny mpamaky, ny ankamaroan'izy ireo dia avy amin'ny tanàna misy aterineto, ary ny ankabeazany dia mipetraka eto Antananarivo. Fa misimisy ihany koa ny mpamaky any Eoropa, ary vitsivitsy any Kanada sy Etazonia.
Mpikambana ao amin'ny ekipan'ny GV amin'ny teny Malagasy. Nahazoana alàlana ny sary
GV: Ahoana ny resaka ifanaovan'ny mpampiasa aterineto malagasy momba ny zava-mitranga manerana izao tontolo izao? Ohatra, ny Lohataona Arabo na ny fihetsiketsehana any Brezila.
MA: Tsikaritray fa ny mpampiasa aterineto dia manomboka miresaka sy mampitaha ny vaovao iraisam-pirenena amin'ny zava-mitranga aty Madagasikara, indrindra rehefa resaka politika. Nefa mbola mitsakotsako tsara ny teny aloaky ny vavany izy ireo rehefa maneho ny heviny ampahabemaso, ny ankamaroany dia tia kokoa miteny amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy. Ny tena marina, ny ankamaroan'ny olona dia matahotra ny sivana ataon'ny governemanta, matahotra ny ho voarahona na ho voaenjika izy ireo raha sahy milaza zavatra mahakasika ireo eo amin'ny fitondràna amperinasa.
ZO: Fantatrareo fa i Madagasikara dia mbola eo ampivoahana amin'ny kirizy ara-politika sy sosialy lehibe. Amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa aterineto Malagasy dia tsy miresaka na mametraka ny heviny mivantana fa maka ireny vaovao ireny ho ohatra izay tokony arahin'ny olompirenena Malagasy na tsia rehefa samy miady hevitra na rehefa misy fitovitovizana amin'ny tantaran'i Madagasikara ankehitriny.
GV: Inona no olana sedrainareo rehefa mandika lahatsoratra tena mahitsy amin'ny teny Malagasy? Inona ny lahatsoratra be mpamaky indrindra?
MA: Ny olana tena sedraina dia ny fandikàna ireo teny ara-teknika, ara-ekonomika, ara-siantifika sy araka ny lalàna. Ny teny tsy fampiasa andavanandro. Araka ny fantatsika, i Madagasikara dia zanatany frantsay taloha, ary ny mpamaky dia mitodika foana amin'ny teny frantsay rehefa misy teny malagasy sarotra tsy azony.
Anisan'ny lahatsoratra be mpamaky indrindra ireo mahakasika ny olana ara-politika, ary heveriko fa anisan'izany ito: Madagasikara: Hisy ve ny fanapahan-kevitra hialàna amin'ny olana?
GV: Afaka milaza mpampiasa aterineto (mpitoraka bilaogy, mpampiasaTwitter sy hafa) Malagasy dimy izay atolotrareo ho an'ny mpamaky ny GV ve ianareo?
MA: Amin'ny Twitter: @Malgachie, @wakeupmada, @Njivatahiry, @MdgMediaCenter, @rrvaly
Mpibilaogy mendrika indrindra:
ZO: Avelao aho hilaza mpitoraka bilaogy Malagasy enina izay tsy mpandray anjara amin'ny GV mba ahalalàn'ny besinimaro azy ireo kokoa. Ny ankamaroan'izy ireo dia vaovao ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ary heveriko fa rariny raha asandratra izy ireo.
– Anosibe [fr] (ny lohatenin'ny bilaogy dia anarana tanàna mampatahotra ao amin'ny renivohitry Madagasikara.)